Milateriga Itoobiya oo sheegay inay la wareegeen Garoon Diyaaradeed | Berberanews.com
Home WARARKA Milateriga Itoobiya oo sheegay inay la wareegeen Garoon Diyaaradeed
Milateriga Itoobiya oo sheegay inay la wareegeen Garoon Diyaaradeed
Ethiopia-(Berberanews)-Milatariga Itoobiya ayaa lawareegay garoonka diyaaradaha ee udhow magaalada Humera xili ay kudhowaad usbuuc iska hor imaad ka jiro waqooyiga gobolka Tigray.
Warbaahinta dowladda ayaa salaasadii ku dhawaaqday qabsashada garoonka diyaaradaha, oo 67km (42 mayl) koonfurta ka xigta Humera, arrintan ayaa daba socota dagaalka sii socdo iyadoo la sheegayo in ciidamada dowladda Itoobiya qabsadeen dhul.
“Ciidamada Difaaca Qaranka ee Itoobiya ayaa si buuxda u qabtay garoonka diyaaradaha Humera iyada oo ay socoto [sii] sii socoshada jawaabta militariga ee xukuumada ee ka dhanka ah kooxda fallaagada ah ee TPLF,” Fana TV ayaa werisay, isaga oo ula jeeda ururka hogaamiya dowladda ee gobolka Tigray.
Humera waxay ku taalaa waqooyi-galbeed ee fog ee dalka, una dhow xuduudaha Itoobiya la wadaagto Suudaan iyo Ereteriya. Isgaadhsiinta taleefanka iyo internetka oo ka go’ay Tigray ayaa adkeysay xaqiijinta xaalada dhulka.
Midowga Afrika ayaa salaasadii ku baaqay xabad joojin deg deg ah. “Gudoomiyaha [Moussa Faki Mahamat] wuxuu codsanayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada wuxuuna ugu baaqayaa dhinacyada inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha ayna hubiyaan in la ilaaliyo dadka rayidka ah,” ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay Midowga Afrika, iyadoo sidoo kale ku boorisay wadahadalada.
Tigreega oo noqolkiiba 6 ka ah Itoobiya waxay haystaan Ilaa 250,000 oo dagaalyahano ah Qoomiyada Tigreegu
Waxay haysteen, kahor xukunka Abiy, inay xukumaan siyaasada ku dhawaad ​​30 sano.
Waxay ku adkaadeen dagaalladii 1999-2000 ee ay la galeen waddanka deriska la ah ee Eritrea iyo halgankii lagu ridayay Mengistu Xayle Mariam 1991. Iyaga iyo xulafadooda waxay gaadhayaan ilaa 250,000 oo dagaalyahanno waxayna leeyihiin saanad milatari oo aad u tiro badan, sida laga soo xigtay kooxda xasaradaha adduunka.
Previous articleSomaliland iyo DDSI oo ka arrinsanaya la dagaallanka ganacsiga duurjoogta
Next articleWasiir Sahal ” Aniga Seeftu Dhabarka ayay iga Taabataye, Adigu Madaxa Ka ilaasho”